Tusmooyinka Safarka Xalaal ee Jasiiradaha Exuma
Taariikh: Thu 14 Dhul Qidah 1442AH 24-6-2021AD By Irwan Shah Categories: Bahamas Tags: Caribbean, Baashaal, Jasiiradaha Bahamas No comments
Duufaanta Dorian waxay ku dhufatay jasiiradaha Abaco bishii Sebtember 1 iyada oo ay wadatay dabaylo ugu badan oo joogtay 185 mph (295 km / h), oo ay ku xidhnayd 1935 Day Day duufaan loogu talagalay xawaaraha dabaysha ugu sareeya ee duufaanta Atlantik ee waligeed lagu diiwaan geliyo dhulka. Dorian waxay ku dhaqaaqday inay weeraraan Grand Bahama si la mid ah xoojinta, waxay joojisay waqooyiga dhulka iyadoo dabeylo aan joogsan laheyn ugu yaraan 24 saac. Dhaawaca ka dhashay jasiiradahan wuxuu ahaa mid masiibo ah; dhismooyinka badankood waa la simay ama lagu xaaqay badda, ugu yaraan 70,000 oo qof ayaa ku hartay
Caadi ahaan waxaa loogu talagalay howlaha kalluumeysiga iyo doonyaha mid ka mid ah ayaa yimaada Jasiiradaha Exuma maaddaama meeshani ay caan ku tahay adduunka labadan hawloodba. Bad maaxida waxaa loo sameeyay si layaableh oo qurux badan iyada oo ay joogaan jasiirado qurux badan oo fidiya maylal iyo in ka badan iyo godadka iyo dhulal qarsoon.
Bahamas Hagaha Socdaalka Xalaal
Cusboonaysiintii ugu dambeysay: Sebtember 24, 2021 12:00 PM EST
Baashaal waa degmo ka mid ah Bahamas, oo ka kooban in ka badan 360 jasiiradood (ama godad). Midka ugu weyn, iyo midka kaliya ee leh dad wax ku ool ah, waa Great Exuma, oo dhererkeedu yahay 37 mi (60 km).
Labadaba ujeedooyin madadaalo iyo doonyaha, dadku waxay ku raaxaystaan ​​ku safridda halkan iyo sidoo kale hareeraha jasiiradaha Bahamas.
Halkan heerkulku wuxuu joogaa qiyaastii 78F sanadka oo dhan. Buuraha rog rogaya ee cirifka iyo xeebaha ballaaran ee bacaadka ah iyo sidoo kale biyaha quruxda badan ee quruxda badan ayaa nolol siiya qaar ka mid ah xayawaanada adduunka ugu layaabka badan.
Dhowr shimbiro dhif ah iyo xamaarato qalaad iyo sidoo kale kalluun badan oo midabo badan leh ayaa ku nool Exuma Cays Land iyo Sea Park.
Tani sidoo kale waa guriga loogu talagalay noocyada yaabka leh ee flora. Biyahan gacmeedku waxay la nool yihiin nolol waana tan waxa ay u cunaan kuwa qudaarta inay u muuqdaan kuwo soo jiidasho leh oo soo jiidasho leh.
Noocyada halkan ku xeel dheer waxay u kuurgalaan xeebta weyn ee loo yaqaan 'coral reef' ama Exuma Sound. Dhawaaqa Exuma waxaa ka buuxa boholo, godad buluug ah iyo doonyo burburay.
Qiyaastii 3,600 oo qof ayaa deggan Jasiiradaha Exuma. Waxay inta badan noloshoodu ku tiirsan tahay beerashada, kalluumeysiga iyo dalxiiska. Jasiiradda waxaa ku yaal burbursanaa degsiimooyin hore, suuqyo bannaanka, iyo bulshooyinka beeraha oo aad u yar.
Khudaar iyo fawaakih badan ayaa laga dhoofiyaa jasiiradahan loona kala dhoofiyaa qaybaha kala duwan ee adduunka sida cananaaska cusub, yaanyada dhadhan fiican leh, guava casiir leh, cambe macaan, avokado aad u weyn iyo digir xamaam ah. Jasiiradaha Exuma ayaa loo doortay goobo badan oo filimo ah waxayna caan ku yihiin Hollywood.
In ka badan jasiirad kale oo ku taal Bahamas jasiiraddan ayaa laba jeer lagu arkay filimada James Bond. Wax kastoo ay tahay inaad raadineysay - ha ahaato doon, kalluumeysi, quusid, ecotourism ama baxsad - waxaad hubtaa inaad ka heli doonto halkan jasiiradaha Exuma.
Exuma Yar - Kuleylka Xeebta Kansarka
Xeebta ugu dheer jasiiradda Exuma iyo sidoo kale tan ugu wanaagsan waxaa loo yaqaan Little Exuma. Biyaha halkan waa buluug-cagaar waxaana xuduud la leh ciid cirro leh. Kuleylka kansarku wuxuu si toos ah u dhex maraa xeebtaan sida caadiga ah waxaad ka heli doontaa xeebtaan oo cidlo ah sidaa darteedna waa goob ku habboon cidlada.
Exuma Weyn - Goobaha Dalxiis ee Xeebta
Tani waa mid ka mid ah xeebaha ay tahay inaad booqato marka aad gasho jasiiradaha Bahamas inkastoo aysan caan ku ahayn xeebta.
Tani waa xeeb leh cufnaan weyn oo mangrove ah waana in lagu soo booqdaa dalxiis aan caadi aheyn oo khibrad u leh.
Qaar badan oo ka mid ah jasiiradaha ku yaal Exumas ayaa si gaar ah loo leeyahay. Kaliya jasiiradaha la deggan yahay ee u furan dadweynaha (ama ugu yaraan bixiya martida) ayaa ku qoran halkan.
Musha Cay - Dalxiis aad u gaar ah oo martigaliya hal koox oo ka kooban ilaa 20 martida markiiba
George Town oo ku yaal Exuma weyn
Silsiladda jasiiradda Exuma waa 130 mi (209 km) dheer. Jasiiradaha waqooyiga ugu dhow waxay saacad ka fog Nassau u joogaan doonyo dheereeya, hawlwadeenno badan oo dalxiis ahna waxay bixiyaan safar maalinle ah. Great Exuma waxay leedahay garoonka diyaaradaha kaliya ee jasiiradaha ku yaal, kaasoo duulimaadyo ka hesha Atlanta, Miami, Fort Lauderdale iyo Nassau. Gegada diyaaraduhu waxay qiyaastii 10 mi (16 km) waqooyi ka xigtaa degitaanka weyn ee George Town. Jasiiradaha kale waxaa lagu gaari karaa charter ama doon kuu gaar ah.
Exuma Weyn waxaa lagu arki karaa gaariga. Jasiiradaha kale waxaa lagu tagi karaa oo keliya axdi safar ama doon.
Kirada gaariga iyo doonta waxaa laga heli karaa George Town, Great Exuma iyo garoonka diyaaradaha. Waa inuu haystaa liisan darawalnimo oo caalami ah ama Mareykan ah.
Ogsoonow in Exuma - sida kuwa oo dhan Bahamas - wuxuu ku kaxeeyaa dhinaca bidix ee wadada. Gawaarida kirada sida caadiga ah waxaa lagu qeexi karaa sida hagitaanada lugta bidix / midig ee ku xiran helitaanka
Taksi Biyo Ah Oo U Kaydinaya Jasiiradda
Waxay ka tagtaa laba jeer maalin kasta Makhaayada Nabadda iyo P ብዙ ee ku taal Georgetown Harbor ilaa Cay deriska Cay ee Jasiiradda.
Saddleback Cay. Jasiirad gaar loo leeyahay oo ay leedahay Island World Adventures, oo safar maalinle ah ka qaadata Nassau maalin kasta ($ 190 / pp). Jasiiraddu waxay leedahay toddobo xeebo, oo ay ku jiraan qurux badan Xeebta Dayax badh, Xeebaha gacmeed ee agagaarka ku yaal iyo meel ay ku kulmaan kalkaaliyeyaal caafimaad oo waaweyn maalin kasta si loo quudiyo.
Thunderball Grotto, halkaas oo filimka James Bond Thunderball ayaa laga duubay.
Maxaa laga sameeyaa Exuma
Iskuujinta Jasiiradda ee ka baxsan George Town, Great Exuma waxay leedahay wadooyin badan oo ay ka mid yihiin dejinta socodka dabiiciga ah ee Nabadda & Badan iyo Dive Exuma ee 2000/1 oo leh sharraxaad badan oo dhir ah. Wuu kori karaa buurta Taallada si aad u aragto muuqaal dusha sare ah, ama ku lugee xeebta dheer ee dhinaca badda. In ka badan 10km oo raad ah ayaa calaamadeysan oo socodsiiya jasiiradda oo dhan. Khariidadaha waddooyinka waxaa laga soo qaadan karaa xafiiska dalxiiska ee George Town.
Xagee lagu nagaadaa Exuma
Naadiga Nabadda & P ብዙ Hotel Exuma Island
Ammaan ku joog Exuma
Isgoyska ka imanaya Nassau ilaa dhamaadka woqooyi ee Exumas waa 40 mayl oo kaliya, laakiin wuxuu marayaa biyaha furan wuuna kala go'i karaa haddii ay dabayl leedahay. Keenso jaakad diiran oo sifiican aan biyuhu ufilanayn, iskuna day inaad fadhiisato meel u dhaw bartamaha doonta si loo yareeyo boobka iyo buufinka badda.
Waxaa jira kalkaaliyeyaasha caafimad iyo libaax badeedka ku jira biyaha ku xeeran jasiiradaha. Caadi ahaan ma dhibayaan aadanaha, laakiin waxaa ugu wanaagsan in la waydiiyo talo maxalli ah oo ku saabsan meesha lagu dabbaasho - biyaha gacmeedku badanaa waa fiican yihiin.
Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Jasiiradaha Abaco
Hagaha Socdaalka Xalaasha ee Jasiiradaha Andros
Tilmaamaha Safarka Grand Bahama Halal
Tusmooyinka Socdaalka Xalaasha ah ee Jasiiradaha
Tilmaamaha Safarka Xalaal ee Jasiiradaha Bimini
Miyuu ku yaal Sheraton Xeebtayada Lucaya & Golf Resort Grand Bahama Island waa Hotel Xalaal ama Saaxiibtinimo oo Muslim ah oo ku yaal Bahamas
Ma Atlantis Coral Tower Resort Island Island waa Xalaal ama Hoteel saaxiibtinimo oo muslimiin ah oo ku yaal Jasiiradda Jannada
Ma Sheraton Nassau Xeebta Dalxiis ayaa ah Xalaal ama Huteel Saaxiibtinimo oo Muslim ku yaal Nassau
Ma Wyndham Nassau Resort & Crystal Palace Casino ayaa ah Xalaal ama Hoteel Saaxiibtinimo oo Muslim ku yaal Nassau
Is Best Western Castaways Resort & Suites Bahamas waa Hotel Xalaal ama Muslim Friendly Hotel ah oo ku yaal Freeport
eHalal Safarka Mart > News Latest > Bahamas > Tusmooyinka Safarka Xalaal ee Jasiiradaha Exuma